Ukulandelwa nguMbhali weWordPress eneGoogle Analytics
NgoMvulo, Februwari 8, 2010 NgeCawa, ngo-Epreli 24, 2016 Douglas Karr
Ndabhala enye iposti ngendlela yokulandela umkhondo ababhali abaninzi kwiWordPress eneGoogle Analytics kanye ngaphambili, kodwa ayilunganga! Ngaphandle kweLogop yeWordPress, awukwazi ukufaka amagama ombhali ukuze ikhowudi ingasebenzi.
Ndenze ukombiwa okongeziweyo kwaye ndafumanisa ukuba ndingakwenza njani ngobuchule ngeeprofayili ezininzi zikaGoogle zohlalutyo. (Ngokunyanisekileyo-oku kulapho ufika ekuthandeni ubungcali kubahlalutyi iipakeji ezinje nge Indawo yeWebhu!)
Inyathelo 1: Yongeza iProfayili kwiNdawo ekhoyo
Inyathelo lokuqala kukongeza iprofayili eyongezelelweyo kwi-domain yakho yangoku. Olu lukhetho uninzi lwabantu olungalwaziyo kodwa lusebenza ngokugqibeleleyo kolu hlobo lwesimo.
Inyathelo 2: Yongeza okubandakanya isihluzi kwiProfayili eNtsha yoMbhali
Uya kufuna ukulinganisa kuphela ukujongwa kwephepha okulandelelwe ngababhali kule profayile, ke yongeza isihluzo sombhalo ongezantsi / umbhali /. Inqaku elinye koku - kuye kwafuneka ndenze "eziqulathe" njengomqhubi. Imiyalelo kaGoogle ibiza ^ phambi kwefolda. Ngapha koko, awunakubhala i ^ ebaleni!
Inyathelo 3: Yongeza isihluzi esingafakwanga kwiProfayili yakho yasePrayimari
Awuyi kufuna ukulandelela konke ukujonga iphepha elongezelelweyo ngumbhali kwiProfayili yakho yoqobo, ke yongeza isihluzi kwiprofayili yakho yoqobo ukuze ungabandakanyi isikhombisi esisezantsi / ngumbhali /.
Inyathelo 4: Yongeza iLoop kwiSkripthi sePhepha
Ngaphakathi kwindlela yakho yokuKhangela kuGoogle okhoyo kunye nangaphantsi kwendlela yakho yangoku yePageView, yongeza iluphu elandelayo kwifayile yomxholo weenyawo:
Umlobi weTracker = _gat._getTracker ("UA-xxxxxxxx-x"); umbhaliTracker._trackPageview ("/ ngumbhali / ");
Oku kuyakubamba konke ukulandelela kwakho, ngumbhali, kwiprofayile yesibini kwindawo yakho. Ngokukhuphela ngaphandle oku kulandelwa kwiprofayili yakho ephambili, awongezi ukongezwa kokujonga okungafunekiyo. Gcina ukhumbula ukuba ukuba unephepha lasekhaya elinamaphepha ama-6, uya kulandelela ukujonga iphepha elinesi-6 ngale khowudi-enye yeposti nganye, elandelwa ngumbhali.
Nantsi indlela yokuKhangela kuMlobi eya kujonga kuloo nkangeleko ethile:
Ukuba oku ukwenzile ngendlela eyahlukileyo, ndivuleleke kwiindlela ezongezelelweyo zokulandela ulwazi lombhali! Kuba ingeniso yam yeAdsense inxulunyaniswa neprofayile, ndiyabona ukuba ngawaphi ababhali abenza eyona ntengiso ingeniso :).
tags: umbhaliUkulandela umkhondo kombhalii-google analytics
Ngaba abathengisi bangabetha igolide kuFacebook?
Feb 8, 2010 ngo-3: 16 PM
Iposi enkulu uDoug! Enye indlela yokulandela ababhali kweli nqanaba kukulandela umkhondo womsitho kwi-GA. Unokufumana ukubala ukuba zingaphi izihlandlo ezibhalwe ngababhali bakho, kwiprofayili efanayo nedatha yakho yesiqhelo, ngaphandle kokujonga iphepha. Kananjalo ungasebenzisa ubungakanani obuninzi kwingxelo yoMnyhadala ukubona ukuba yeyiphi imithombo eqhuba iindwendwe kubabhali abohlukeneyo (umzekelo: ngubani otsala abafundi abaninzi ngeTwitter), apho bavela khona, njl njl. Ndizamile ukuthumela iskripthi, kodwa mna yayingaphaya komda weempawu. Nalu ikhonkco: http://www.wheresitworking.com/2010/02/08/tracking-authors-in-wordpress-with-google-analytics-event-tracking/
Feb 10, 2010 ngo-8: 50 AM
UDoug, uhlala ubeka iposti elungileyo ngexesha elifanelekileyo, ndiza kuyiphumeza le bhlog yethu yase-Indiana Insider (http://www.VisitIndiana.com/blog/) namhlanje!
Mar 6, 2010 ngo-2: 19 AM
Ndiyoyikeka, enkosi ngokwabelana nale Doug! Ndifumanisa ukuba i_author () kufuneka ithathelwe indawo yi get_the_author () ukuthintela ukuba igama lombhali liphindwe kwaye likhutshwe kabini.
Isisombululo sakho sithelekiswa njani nesika-Adam?
Jan 27, 2011 ngo-7: 32 PM
UDoug, ndizamile ukumilisela oku, kodwa kukulandela umkhondo weyona mibhalo yamaphepha (… / umbhali / AUTHORNAME), kwaye hayi umbono weposti nganye ejongiweyo, eyahlulwe ngumbhali- naziphi na iingcinga?
Jan 27, 2011 ngo-7: 42 PM
Indlela endiyiphumeze ngayo ibisebenzisa iiakhawunti ezimbini ezahlukeneyo kuGoogle Analytics (iikhowudi ze-UA ezahlukeneyo). Ndibiza iakhawunti enye "nguMbhali" kwaye enye ndiyigcina njengesi siza sonke. Yenza ingqondo?
Jan 27, 2011 ngo-7: 46 PM
Owu, ziikhowudi ezimbini ezahlukileyo ze-UA? Ndiseta iprofayile entsha phantsi kwekhowudi ye-UA yebhlog. Ndiza kuyidubula kwaye ndiza kukwazisa ukuba iyandisebenzela.
Juni 25, 2012 ngo-2: 15 PM
Enkosi kakhulu. Ndizama oku ngoku. Inye into nangona kunjalo, ndiyisusile "i-echo" ngaphandle kweloop kuba kubonakala ngathi iyaphindaphinda igama lombhali. Umzekelo / ngumbhali / igama loMbhaliIgama lomlobi lalivela nge-echo.
Oktobha 12, 2014 ngo-4: 23 PM
Enkosi ngesifundo. Ndidinga ukulandelela ukujonga iphepha ngalinye umbhali kwibhlog yeendaba eqokelela ukuze ndibhatale ngeembono.
Ukubandakanya iphepha lasekhaya akusebenzi, nangona kunjalo.
Ngaba ungayikhuphela ngaphandle ikhowudi kwiphepha lasekhaya? Ukuba le khowudi ibifakwe kuphela kubume bephepha elinye (ukhetho kwiphepha lewebhu), ngaba ingasebenza? ngaphandle kweembono zekhasi lasekhaya kubalo?
Oktobha 12, 2014 ngo-4: 49 PM
Kudala sisebenzisa Umxholo ngenxa yoko kwaye isebenza kakuhle.
Meyi 16, 2015 kwi-8: 54 PM
Uyenza njani inyathelo loku-1 nceda: "yongeza iprofayili eyongezelelweyo kwindawo yakho yangoku"
Ubonisa indlela yokugqibezela inyathelo, kodwa hayi indlela yokufika apho kwindawo yokuqala.
Meyi 17, 2015 kwi-9: 28 PM
Ngokuqinisekileyo abayenzi lula, kuJustin? Nalu ushwankathelo lwe- google Analytics phepha.